Tag Archive for "एकनारायण भण्डारी" - एकनारायणको 'छिपछिपे पानीमा लेउ'मा दिलीप र सुरक्षा !
एकनारायणको ‘छिपछिपे पानीमा लेउ’मा दिलीप र सुरक्षा !
काठमाडौं । नेपाली लोक गित संगितका प्रिय सर्जक एकनारायण भण्डारीको 'छिपछिपे पानीमा लेउ' सार्वजनिक भएको छ । बिष्णु माझी र पितम्बर जिसीको स्वरमा रहेको 'छिपिछिपे पानी लेउ' बिहीबार एक नारायण भण्डारीको आफ्नै युटुव च्यानलबाट बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । एक नारायण भण्डारीको शब्द संगित रहेको गितमा चर्चित निर्देशक प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेको यो भिडियोलाई राजेश घिमिरेले खिचेका हुन् । गितमा चलचित्र क्षेत्रक... थप पढ्नुहोस्
शंकरले सुष्मालाई जिस्काउँदा फुटाए पानीको घैला
“फुट्यो पानीको घैला, गाउँ भरी भयो खैलाबैला” १ असार,काठमाडौं । नेपाली लोकदोहोरी गीत पानीको घैला सार्वजनिक भएको छ । चर्चित लोकगायिका पूर्णकला बीसी र गायक भुपेन्द्र चाम्लागाईको संयुक्त आवाजमा रहेको पानीको घैला बोल गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । एकनारायण भण्डारीको शब्द रचना रहेको गीतमा भण्डारीको आफ्नै संगीत रहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको भिडियोमा चर्चित अभिनेत्री सुष्मा कार्की र लोकदोहोरीक... थप पढ्नुहोस्